अचानोको पिर खुकुरीलाई थाहा हुदैँनः बैदार - Sindhuli Saugat
अचानोको पिर खुकुरीलाई थाहा हुदैँनः बैदार
अन्तर्वार्ता २०७५ असोज १६ गते मंगलवार अन्तर्वार्ता
विगत एक दशक देखि सिन्धुलीमा व्यापार, व्यवसायमा सक्रिय रहेका अमेरशचन्द्र बैदार आगामी जेठ ४ गते हुने सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको चुनावमा प्रजातान्त्रिक समुह तर्फका अध्यक्ष उम्मेदवार हुन् । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो संस्थाको शाखा अध्यक्षका प्रत्यासि जोशले भरिएका युवा रहेकाले पनि सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव रोमाञ्चीत बन्ने देखिन्छ । संघको उपाध्यक्ष समेत बनेका बैदारको प्यानललाई पुर्व अध्यक्ष र व्यवसायीहरुको समर्थन रहेकाले पनि आफ्नो पुरै प्यानलले जित्नेमा बैदार विश्वस्त छन् । नम्र स्वभावका बैदारको व्यवसायीहरुबिच सुमधुर सम्बन्ध छ । खासै राजनैतिक दलमा आबद्ध नरहेर व्यवसायीको हकहितमा लाग्ने व्यक्तिको रुपमा बैदारलाई व्यवसायीहरुले चिन्ने गरेका छन् । उनी आफ्नो कार्यकालमा महाभुकम्प र अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा खासै योग्दान दिन नसकेकोमा पछुतो मान्छन् । तर, देशलाई पिडा परेको अवस्थामा सिन्धुलीका व्यवसायी र उद्योग वाणिज्य संघ परिवारले देखाएको सक्रियता र योग्दानले भने आफूलाई गौरव महशुश गराउने गरेको उनी बताउँछन् । उनले आफ्नो पुरै प्यानलले आगामी तीन वर्षकालागि काम गर्ने अवसर पाए जिल्लाको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा नमुना कामहरु गर्ने बताउँदै आएका छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धामा लागिपरेका बैदारसँग चुनावको माहोल, व्यवसायीको प्रतिक्रिया लगायत भावि योजनाका बारेमा सिन्धुली सौगातका प्रधान–सम्पादक सगुन रायमाझीले गरेको कुराकानिको सम्पादित अंशः
अन्त्यमा, राजनीतिक दलमा आबद्धताको हिसाबले नै दुई फरक प्यानल बनाएर चुनावमा उत्रिनु पर्‍यो नि ?
सर्वप्रथम त, म सबैलाई के बुझाउन चाहान्छु भने यो क्षेत्रमा राजनैतिक हस्तक्षेप हुनुहुदैन । किनभने, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छोड्न सकेमात्र देशको अर्थतन्त्रमा यस्ले मुख्य भुमिका खेल्न सक्छ । हरेक मान्छेले कुनै न कुनै राजनैतिक दलको आस्था बोकेर हिँड्ेको हुन्छ । तर, आफ्नो क्षेत्रमा राजनितिलाई उपयोग गरेर मनलाग्दी गर्न खोज्नु भनेको पदको दुरुपयोग गर्नु हो । हामी अहिले दुई प्यानलमा विभाजित छौँ । धेरैले दुवै प्यानललाई राजनैतिक दलसँग आबद्ध रहेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा लागेको बताइरहेका छन् । तर, मलाई लाग्दैन कि राजनितिले यस क्षेत्रमा खासै प्रभाव पार्न सक्छ । मैले भन्न खोजेको के भने, हामी जुनै राजनैतिक दलसँग आबद्ध रहेपनि हामीले कहिले पनि राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि यो क्षेत्रलाई उपयोग गर्नु हुदैँन । त्यसैले, म सर्वसाधरणलाई के आश्वसत बनाउन चाहान्छु भने हामीलाई जुनै दलको बिल्ला भिराए पनि हामी सधैँ व्यवसायीको हकहित र उनीहरुको अधिकार संरक्षणमा लाग्ने छौँ ।
वाम गठबन्धनको प्यानल तपाईँहरुको प्रत्यासी छन् । जिल्लानै वाम गठबन्धनमय बनेको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धा कठिन हुने देख्नु हुन्छ ?
मलाई लाग्दैन कि व्यवसायीहरुले राजनैतिक दलसँग जोडेर संघको चुनावमा मतदान गर्नेछन् । किनभने, राजनिति र संघमा थुपै्र भिन्नता छ । म विश्वसत छु, जिल्लाका मतदाताहरुले राजनैतिक दललाई प्राथमिकतामा राखेर मतदान गर्ने छैनन् । संघमा देखिएका समस्याहरु स्वयं संघका पदाधिकारीहरुले समाधान गर्ने हो । व्यवसायीहरुले कुनै राजनैतिक दलको इशारामा लागेर संघलाई राजनिति गर्ने थलो बनाउन दिने छैनन् । त्यसैले पनि मलाई लाग्छ कि जिल्लामा वाम गठबन्धनको वर्चश्व रहेपनि मतदाताहरुले सक्षम, इमान्दार, अनुभवि र संघलाई हाक्न सक्ने खुबि भएकाहरुलाई नै विजयी गराउने छन् । यसो भनिरहदा, मैले कुनै राजनैतिक दलसँग संघको कुनै सम्बन्ध हुनुहुदैँन भन्न खोजेको होइन । राजनैतिक दलले मात्र नभएर हरेक क्षेत्रले संघप्रति चासो देखाउनु स्वभाविक हो । तर, संघको नेतृत्वलाई राजनैतिक दलसँग जोडिनु हुदैँन ।
चुनावी प्रचारप्रसारमा लागिरहदा मतदाताहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ?
चुनावी प्रचारप्रसारमा लागिरहदा हामीले मतदाताहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेका छौँ । व्यवसायीहरु हाम्रो उम्मेदवारी प्रति खुशी छन् । हामी अहिले सम्म जता जता गएका छौँ, उहाँहरुबाट पूर्ण साथ र सहयोग पाइरहेका छौँ । कतिपय मतदाताहरुले हामीसँग उद्योग वाणिज्य संघमा राजनिति हुनुहुदैँन भनिरहेका छन् । उहाँहरुले संघलाई हाक्ने सक्षम टिमको आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन् । व्यवसायीहरुको समस्यालाई आत्मशात गर्दै हामी चुनावी प्रचारप्रसारमा लागिपरेका छौँ । जिल्लाका व्यवसायीहरुले हाम्रो टिमलाई पुर्ण रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिक्रियाहरु पाइरहेका छौँ । मलाई विश्वास छ, मतदाताहरुले हामीलाई बहुमतका साथ नेतृत्वमा ल्याउने छन् ।
व्यवसायीहरुको समस्या यथावत् रहेको गुनासो छ । तपाईँले मतदाताहरुको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सक्छु भन्ने आधार के छ ?
जिल्लामा विभिन्न व्यवसायमा संलग्न रहेकाहरुले थुप्रै समस्या झेलिरहनुपरेको छ । म आफैँ पनि यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेको छु । मैले आफैँले पनि थुप्रै समस्याहरुको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ । त्यसैले पनि मेरो सम्पुर्ण टिम नेतृत्वमा पुग्न सकेमा मैले आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरुलाई क्रमबद्ध रुपमा हल गर्ने छु । यस्तो भनिरहदा नेतृत्वमा पुग्ना साथ म यस क्षेत्रको कायापलट गर्नेछु भनेर मतदाताहरुसँग झुटको खेति गर्दिन । म के भन्न चाहान्छु भने यस क्षेत्रमा देखिएका थुप्रै समस्याहरुलाई व्यवसायीहरुकै साथ र सहयोगमा समाधान गर्दै अघि बढ्नेछु ।
संघमा राजनैतिक दलको प्रभाव पर्दा आगामी दिनमा व्यवसायीहरुबिच पक्षपात नहोला भन्न सकिन्छ त ?
म फेरिपनि के भन्न चाहान्छु भने उद्योग वाणिज्य संघ एउटा स्वतन्त्र संस्था हो । कुनै एक प्यानलले चुनाव जित्दैमा अरु दलको आस्था बोकेका व्यवसायीहरुलाई पक्षपात गर्न खोजियो भने त्यो अन्याय हुन्छ । सर्वप्रथम त, संघमा राजनैतिक नेतृत्व हावि हुनुहुदैँन भन्ने पक्षमा म लगायत मेरो सम्पुर्ण टिम उभिएका छौँ । सहमति जुटाउन जसरी हामी एक्यबद्ध भएर लाग्यौँँ, त्यसरी नै संघमा राजनिति हावि हुन नदिन पनि सँगै अघि बढ्नेछौँ । अब बन्ने नयाँ संरचनामा कोहि पनि व्यवसायीहरुलाई अन्याय हुनुहुदैँन र संघको विकासनै सबैको मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्छ । व्यवसायीहरुको समस्या व्यवसायीहरुकै संघले समाधान गर्नुपर्छ । व्यवसायीको समस्या हल गर्न बाहिरी क्षेत्रको सहयोग अपेक्षा गर्नु मुर्खता मात्र हो । किनभने, अचानोको पिडा खुकुरीलाई महशुश हुदैँन । उद्योग वाणिज्य संघ सबै व्यवसायीको साझा संस्था हो, त्यसैले व्यवसायीहरुबिच पक्षपात हुनुहुदैँन । संस्थाभित्र राजनीतिकरण गर्ने भन्दा पनि व्यवसायिक हितमा काम गर्ने हो, यसमा जिल्लामा रहेका दलहरुको साथ र सहयोग लिनु पर्दछ तर संस्थामा राजनैतिक हस्तक्षेप भने हुनुहदैँन ।
उद्योगी व्यवसायीहरुको साथ र सहयोग कतिको छ ?
जिल्लाका महिला, युवा तथा सम्पुर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुले हामीलाई सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । हाम्रो समूहलाई पुर्व अध्यक्षहरुले समर्थन गरिरहनु भएको छ । त्यसैले पनि जिल्लाका अधिकांश व्यवसायीहरुले हाम्रो चुनावी अभियानमा साथ र सहयोग गरिरहनु भएको छ । म उहँहरुप्रति आभारी छु । उहाँहरुले देखाउनु भएको उत्साह र मिहिनेतले म लगायत मेरो सम्पुर्ण टिमलाई उर्जा मिलेको छ । उहाँहरुको विश्वासलाई हामी खेर जान दिने छैनौँ । उहाँहरुको माया र विश्वासले गर्दा नै हामी आज यो अवस्थामा पुगेका छौँ । त्यसैले, मलाई पुर्ण रुपमा विश्वास छ, उद्योगी व्यवसायीहरुले मलाई सधैँ सहयोग गर्नु हुनेछ ।
म छोटकरीमा के भन्न चाहान्छु भने सिन्धुली जिल्लामा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा प्रचुर संभावनाहरु रहेका छन् । यहाँका श्रोत र साधनको उपयोग गर्न सके व्यवसायीहरुले थुपै फाइदा लिन सक्ने अवस्था छ । व्यवसायीहरुको साझा संस्थामा योग्य व्यक्तिले नेतृत्व लिन सके सबैलाई लाभ हुनेछ । त्यसैले पनि हाम्रो टिमलाई जसरी जिल्लाका व्यवसायी लगायत सरोकारवाला निकायले सहयोग गरिरहनु भएको छ, आगामी दिनमा पनि साथ र सहयोगले निरन्तरा पाओस् भन्ने अपेक्षा गरेको छु । आगामी जेठ ४ गते हुने चुनावमा सबैले सहभागित जनाएर हाम्रो टिमलाई बहुमतका साथ जिताउन सबैसँग आग्रह गर्दछु । अन्त्यमा, आफ्नो टिमको विचार व्यक्त गर्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
पछिल्लाे - चलचित्र ‘कृ’को विवादित गीत युट्युबबाट हटाएर नयाँ गीत राखियो,यस्तो छ नयाँ गीतको (भिडियो)
अघिल्लाे - २०७५ असोज १७ गते बुधबारको राशिफल